कोरोना महामारीमा किन घट्यो कण्डमको बिक्री? – Health Post Nepal
२०७८ माघ ५ गते १२:०१
काठमाडौं – विश्वको सबैभन्दा ठूलो कण्डम निर्माता कारेक्स बर्हाडका सिईओ मिह कियात गोहले महामारीको समयमा कण्डम बिक्रीमा समस्या भएको बताएका छन्। जापानी पत्रिका निक्कीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा उनले यस अवधिमा कण्डमको बिक्री ४० प्रतिशतले घटेको बताए। तर, २०२० को प्रारम्भिक महिनामा उनले कोरोना महामारीको समयमा कण्डमको बिक्रीमा ठूलो वृद्धि हुने अपेक्षा गरेका थिए।
महामारीको सुरुमा ब्लूमबर्गसँगको एक अन्तर्वार्तामा उनले भनेका थिए, ‘मानिसहरूलाई घरमा बसेर गर्नलाई सेक्सबाहेक अरू केही छैन।’ महामारीको अवधि पनि स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अनिश्चितताको अवधि हो र यो घट्दो जन्मदरसँग पनि जोडिने गोहले विश्वास गरेका थिए। यस्तो अवस्थामा कण्डमजस्ता गर्भनिरोधक उपायको माग पनि बढ्ने अनुमान गरिएको थियो। यस्तो अवस्थामा उनले कण्डमको माग दोहोरो अंकले बढ्ने आशा व्यक्त गरेका थिए।
कण्डमको बिक्री घट्नुको कारण के?
गोहले बिक्रीमा गिरावटको तीन कारणहरू सूचीबद्ध गरेका छन्। बढ्दो मनोवैज्ञानिक तनावका कारण सेक्सको चाहना घट्नु तथा साना होटल बन्द हुनु, यौन कार्यमा लगाइएको प्रतिबन्ध र सरकारबाट कण्डमको बिक्रीमा आएको ह्रासका कारण मागमा कमी आउनु रहेको उनले बताए।
‘विशेष गरी गरिब देशहरूमा होटल बन्द हुनु नै बिक्री घट्नुको कारण बनेको छ। किनभने यस्ता यौन गतिविधिहरू गरिब देशहरूमा साना होटलहरूमा हुन्छन्। यस्तै विश्वभरका अधिकांश ठाउँमा सरकारले पनि कण्डमहरू वितरण गर्छ।’, उनले भने। उदाहरणका लागि, बेलायतले आंशिक रूपमा आफ्नो राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम (NHS)बन्द गरेको छ। सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले हरेक वर्ष करोडौंको सङ्ख्यामा कण्डम खरिद गर्छन्।
तर, भारतमा भने ग्राहकले यस्तो कमीको सामना गर्नुपरेको छैन। उत्तर प्रदेशको कानपुर सहरमा ड्युरेक्स कण्डम आपूर्ति गर्ने अखिलेशले भने, ‘महामारीको प्रारम्भिक चरणमा आपूर्तिसम्बन्धी केही समस्याहरू थिए तर यो लामो समयसम्म टिकेन।’
कच्चा पदार्थ र आपूर्तिमा पनि समस्या
मलेसिया कण्डम उत्पादनमा अग्रणी छ। किनभने रबर कण्डम निर्माणको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कच्चा पदार्थ हो उ उक्त प्रकारको रबर मलेसियामा सबैभन्दा बढी पाइन्छ। लकडाउनका कारण रबर सप्लाइमा पनि समस्या आयो किनकि रबर सप्लाइलाई अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत राखिएको थिएन। अन्य कण्डम निर्माण कम्पनीहरूले पनि आपूर्ति श्रृंखलासँग सम्बन्धित यस्तै समस्याहरु भोग्नु पर्यो। कोरोना महामारीको सुरुवातमा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोषले पनि कोरोनाको समयमा पहिलेको तुलनामा जम्मा ५० देखि ६० प्रतिशत मात्रै कण्डम आफूले पाउने गरेको बताएको थियो।
यस अवधिमा अधिकांश कच्चा पदार्थ जस्तै रबरको मूल्यमा पनि ठूलो अनियमितता भएको थियो। अप्रिल २०२० को तुलनामा मार्च २०२१ मा रबरको मूल्य लगभग दोब्बर भयो। कोरोनाका बेला अन्य रबर उत्पादनको माग पनि रह्यो। यद्यपि, गोहले सन् २०२२ मा कण्डमको माग पुन: लयमा फर्किने अपेक्षा गरेका छन्। उनले रोयटर्सलाई भने, ‘हामी फेरि माग देखिरहेका छौं। धेरै सरकारहरू कण्डमहरू पुन: भण्डारण गर्न खोजिरहेका छन्।’ गोहले अब नाफामा पनि बृद्धि हुने अपेक्षा गरेका छन्। किनकि ग्राहकहरूले अहिले महंगो उत्पादनहरू खरिद गरिरहेका उनको भनाइ छ।